ROLAND RATSIRAKA : Efa leo fitaka sy bala rora ataony ireo tanora ao Toamasina
Ho avy ny fifidianana, manomboka mihetsiketsika ireo mpanao politika maro. 3 mai 2022
Ho an’ny depiote Roland Ratsiraka ao Toamasina izay sady filoha nasionalin’ny antoko MTS, dia efa manomboka sahady ireo tetika sy paika entina hakana indray ny fom-bahoaka. Manomboka tsy takona afenina ny hanaovany kandida hofidiana Filoham-pirenena amin’ny taona 2023.
Efa fomba fanaony ny mampanantena asa ho an’ny tanora mba hoentina hambaboana tanora. Imbetsaka nanaovany ronono an-tavy tahaka izany ny tanora tao Toamasina. Efa nampanantena asa ho an’ny tanora fony izy kandida Ben’ny tanànan’i Toamasina ary mbola nampanantena asa hatrany fony izy kandida depiote tao Toamasina hatrany ary mbola nampanantena asa ho an’ny tanora fony izy kandida tamin’ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2013 sy ny taona 2018.
Rehefa tonga Ben’ny tanàna sy depiote an’i Toamasina, dia tsy nisy tanteraka akory ilay fanamby fampananan’asa ho an’ny tanora.
Mbola miezaka mampiasa io fampanantenana poakaty io ihany ity mpanao politika ity amin’izao fotoana izao saingy tsy maharesy lahatra tanora maro an’isa ao Toamasina intsony. “Efa maro ny fampanantenana nataony anay izay”, hoy ny feon’ny tanora ao Toamasina. Misy mihitsy ireo nitondra fanehoan-kevitra tao anaty tambajotra sosialy.
Sokajian’ny mpanara-baovao politika ao Toamasina ho olona tsy mba mitazona teny nomena i Roland Ratsiraka ary mpanao politika mora mivadibadika amin’ny teny nataony. Hafa ny avoakan’ny vavany androany, hafa ny ambarany rahampitso.
Nandritra ireny ady mavaivay natao tamin’ny covid-19 ireny, dia Roland Ratsiraka no anisany niantsoantso fanakatonana ny sisintanin’i Madagasikara. Izy indray ihany koa avy eo no anisany nitaky fanokafana izany.
Nialan’ireo olona akaiky azy fahiny
Raha ny zava-misy ao Toamasina, dia nialan’ireo mpiara-miasa akaiky taminy fahiny i Roland Ratsiraka. Misy amin’ireto mpiara-miasa taminy ireto no niloa-bava fa olona sarotra iaraha-miasa ity filoha nasionalin’ny antoko MTS ity ary olona mora manadino ekipa rehefa mahazo fahefana. Maro ireo mpiara-miasa taminy izay nampanantenainy asa sy toerana mialoha ny nahazoany toerana minisitra tamin’ny Fitondrana Rajaonarimampianina ireny fa hadinony rehefa tonga tamin’ny toerana izy.
Eo ireo nilaza fa eo koa ny tsy fahazoany ekipa vaovao hanampy azy amin’ny politika intsony, na ao Toamasina izay tany fiaviany izany, na eo amin’ny sehatra nasionaly.
Sarotra ho azy noho izany ilay nofinofy 2023. Ny fomba fanaovany politika izay efa nidina ambany dia ambany amin’izao fotoana izao. Lasa politika manaratsy olona sy manenjika mpandraharaha. Izy izay mpandraharaha ara-toekarena tany aloha saingy natakalony fanaovana politika izany.